बि.सं.२०७४ साल कार्तिक २९ गते बुधवारको राशिफल
नेपाली मितिः वि.सं. २०७४ । नेपाल सं. ११३८ । योग सं. ३८ । कार्तिक महिनाको २९ गते बुधवार ।
अँग्रजी मितिः ई.सं. २०१७ नोभेम्बर महिनाको १५ तारिख ।
तथीः दक्षिणायन, शरद् ऋतु मार्गशीर्षकृष्ण पक्षको द्वादशी तिथी, १४ः०५ बजेपछि त्रयोदशी तिथी ।
योगः प्रिती योग, २३ः३४ बजेपछि आयुष्मान योग ।
नक्षत्रः हस्त नक्षत्र, १५ः३० बजे पछि चित्रा नक्षत्र ।
करणः तैतिल करण १४ः०५ बजेसम्म उपरान्त गर करण ।
काठमाडौंमा सूर्योदयः ०६ः२६ बजे ।
काठमाडौंमा सूर्यास्तः १७ः१० बजे ।
राहुकालः ११ः४७ बजेपछि १३ः०८ बजेसम्म ।
यात्राः पूर्व र दक्षिण दिशाको लागि उपयुक्त ।
वृष राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन विद्याको अहं बढ्नसक्नेछ । नजानेपनि जानेजस्तो गर्ने मनोविज्ञानले प्रसय पाउने छ, जसलेगर्दा मान्छेहरुले कमजोरी तपाईको कमजोरी फेला पार्नसक्ने छन् । व्यवसायमा केहीमात्रामा लक्ष्मी प्रसन्न हुने र कार्य कार्यान्वयन हुनसक्ने देखिन्छ । सन्तानको बाटोबाट सन्तोष मिल्ने, नीतिगत सफलता मिल्ने छ । दिन ठिकै छ तापनि आफ्नै बुद्धिविवेकले काम नदि“दा पश्चाताप पर्नसक्नेछ, अहंभावलाई संयम गर्नु उचित हुनेछ । शिक्षा दिने व्यक्तित्त्व भेटिने छ ज्ञान लिन नचुक्नु बुद्धिमानी हुनेछ । आज तपाईलाई पाँच अङ्क, रातो रङ्गको प्रयोग र भगवान लक्ष्मीनारायणको भक्तिदर्शन एवं उपाशना गर्नु शुभफलप्रद हुनेछ ।
सिंह राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन सामान्य अनुकूल देखिएको छ । वाणीदोषको संयोग पर्नसक्छ, बोलीवचनको व्यवहारमा ख्याल गर्नुहोला । व्यवसायिक कार्यमा भने प्रगति हुने देखिएको छ तथापि सन्चित धनको अपव्ययलाई भने नकार्न सकिन्न । समाजिक कार्यमा संलग्न हुने मौका मिल्नसक्ने छ । नाता–कुटुम्बिक सम्बन्धमा पनि केही सजग हुन जरुरी छ । आज यहाँको लागि दुई अंक, सेतो रंग शुभ रहने छ भने विष्णुभगवानकोस्तुति अवलम्बन गर्नुले सम्भावित दोषलाई कम गर्न मद्दत हुनेछ ।
वृश्चिक राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन भौतिक उन्नति हुनेछ । प्रतिस्पर्धामा विजय एवं ख्याति मिल्ने छ । पेशा तथा व्यवसायिक कार्यबाट आर्थिक लाभ गर्न सकिने छ । अध्यनअध्यापन एवं सन्तानको पक्षबाट पनि सन्तोष लिनसकिने छ । दिनको सदुपयोग गर्नाले अधुरा रहेका कामलाई पूर्णता दिनसकिने छ । स्वकार्यलाई समय दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । विवाह योग्य युवायुवतीको विवाह प्रसङ्ग चल्नसक्ने सम्भावना छ भने प्रेमाभिलाषिहरुको लागि प्रेमसम्बन्ध जोडिनसक्ने पनि सम्भावना छ । आज यहाँलाई दुई अङ्क, सेतो रङ्गको उपयोग फापकर हुनेछ भने भगवान श्रीहरिको भक्ति विशेष फापसिद्ध हुनेछ ।
धनु राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन गोचरले राम्रो साथ दिएको छ । दीगो कार्यको थालनी गर्न सकिने सम्भावना छ । आफन्तीहरुको सहयोग मिल्ने हुनाले महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्नसकिने छ । वरिष्ठवर्गसँग संपर्क स्थापित हुनाले केही महत्त्वाकांक्षी मनोविज्ञान बढ्ने पनि सम्भावना देखिन्छ । व्यवसायले प्रसिद्धि पाउने छ । राजनीति, समाजसेवा तथा नोकरी आदि क्षेत्रमा पदप्रतिष्ठा तथा जिम्मेवारी थपिनसक्ने छ भने उपयुक्त मानसम्मान प्राप्ति हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिनेछ । प्रेमका पारखीहरुलाई पनि दिन अनुकूल एवं सम्मानित रहनेछ । आज यहाँलाई एक अङ्क, रातो रङ्गको प्रयोग र भगवान लक्ष्मीनारायणको स्तुति शुभप्रद हुनेछ ।
मकर राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन सामान्यतया आफूभन्दा माथिल्लो तहबाट केही दबाब आउनसक्ने छ । केही मलिनताको पनि प्रत्याभूति हुनसक्ने छ तथापि अध्यात्मिक तथा आस्तिक भावना बढ्ने र धार्मिक कार्यप्रति उत्प्रेरणा जागृत हुने दिन रहेको छ । समाजसेवा तथा परोपकार आदि कार्यमा पनि संलग्न हुन र प्रतिष्ठा कमाउन सकिने छ । व्यवसायमा पनि लक्ष्मी कृपा हुने ग्रहगोचरको प्रभाव परेको छ । यात्रायोजना एवम् नयाँ कार्यको थालनीको बारेमा परिवारिक विचार विमर्श हुनेछ । रोकिएर रहेका केही कार्यमा सफलता मिल्नेछ भने जागिरबाट पनि सन्तोष भइनेछ । आज यहाँहरुलाई नौ अङ्क, पहेलो रङ्गको प्रयोग र भगवान लक्ष्मीनारायणको श्रद्धाभक्ति गर्नु शुभ हुनेछ ।
कुम्भ राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन त्यति सहज देखिएको छैन । स्वास्थ्यमा गडबढी हुनसक्ने र गरिरहेको कामकार्यमा पनि झमेला आइलाग्नसक्ने सम्भावना छ । समयको प्रतिकूलतालाई नबुझि कुनै पनि कार्यमा हतार गर्दा उल्टो परिणाम आउनसक्ने र हानी नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्ने छ, ख्याल पुर्याउनु होला । दैनिक कार्यमा बढी परिश्रमको बाबजुत कम उपलब्धिले चित्तबुझाउनु पर्ला, संयम र धैर्य गरी प्रतिकूल समयलाई टर्न दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । बलजबर्जस्तिले पश्चाताप पार्नसक्ने छ । कसैकसैलाई चोटपटकको पनि भए दखिएको छ होसियारी अप्नाउनु होला । आज आठ अंक, रातो रङ्ग शुभ हुनेछ भने रोगीको सेवाले पूण्य दिनेछ ।
मीन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन भौतिक उपलब्धि तथा सांसारिक सुखकर रहनेछ । स्वास्थ्यमा आरोग्यता एवम् कान्ति बढ्ने छ भने शत्रुपक्ष कमजोर बन्ने छन् साथै विजय भइनेछ । जीवन साथीको वा विपरित लिङ्गीको सहयोग मिल्ने र प्रेमसम्बन्ध प्रगाढ बन्नेछ । आन्तरिक तथा वैदेशिक यात्राको पनि योग देखिएको छ । व्यापार व्यवसायीले राम्रो लाभ गर्नसक्नु हुनेछ । जागिर तथा नोकरीमा पनि सन्तुष्टि मिल्नेछ । सात अंक र सेतो रङ्गको प्रयोग एवं विपरित लिङ्गीसँगको सहकार्य वा समन्वय फापसिद्ध हुनेछ ।